အချိန်ကာလ (၁၃) တွင်ပုံမှန်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း ၁၃ - Grenadiers Timothy Brenda Strong - Netflix သတင်း
ရာသီ ၃ အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်များ ၃။ Timothy Granaderos နှင့် Brenda Strong သည်ပုံမှန်စီးရီးများဖြစ်သည်
အဘယ်ကြောင့် 13 အကြောင်းရင်း - ချေးငွေ: ဗက် Dubber / Netflix
Blue Bloods Season9သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်မည်နည်း။ Sierra Burgess သည်ရှုံးနိမ့်သူပြန်လည်သုံးသပ်ချက် - ပြissuesနာအနည်းငယ်နှင့်ပျော်စရာကောင်းသော rom-com
ကျနော်တို့ရာသီ 3. အဘယ်ကြောင့်ရာသီ 3. တိမောသေ Granaderos နှင့် Brenda Strong နှစ် ဦး စလုံးစီးရီးပုံမှန်မှ upped ခဲ့ကြသည်အဘယ်ကြောင့် 13 အကြောင်းပြချက်အတွက် Monty နှင့် Bryce ရဲ့မိခင်အများကြီးပိုမြင်လိမ့်မည်။
ရာသီ3ထုတ်လုပ်မှု ၁၃ အကြောင်းရင်း စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် Netflix မူရင်းစီးရီးသည်သူတို့၏ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်ကိုစီးရီးပုံမှန်အဖြစ်သို့တိုးမြှင့်ထားသည်။ Deadline မှဖော်ပြချက်အရ Montgomery de la Cruz နှင့် Nora Walker တွင်ပါဝင်သော Brenda Strong ကစားသော Timothy Granaderos
uncut ကျောက်မျက် netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
Granaderos နှစ်ခုကိုပိုပြီးမှတ်မိသည်။ သူ၏ဇာတ်ကောင်ကို Monty ဟုလူသိများသောစီးရီးတွင်ရာသီ ၁ နှင့် ၂ တွင်ဖော်ပြထားသည် ၁၃ အကြောင်းရင်း ။ Granaderos သည်ရာသီ ၂ တွင်ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ had မှပါဝင်ခဲ့ပြီး Monty သည်ကျောင်းသားများကိုအကြမ်းဖက်မှုနောက်ကွယ်မှဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူလည်းဟန္န Baker ရဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းသက်သေခံလျက်, နိဂုံးဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ, သူသည်သူ၏လိင်သူချင်းကျောင်းသားများ, Tyler စော်ကား။
Granaderos စီးရီးကိုပုံမှန်စီးဆင်းခြင်းသည်သရုပ်ဆောင်အတွက်အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ မကြာသေးမီကအင်တာဗျူးတွင် သူဟာရာသီ (၂) ပွဲစဉ်မှာပါ ၀ င်ခဲ့ပေမယ့်သူဟာရာသီ (၃) မှာပြန်လာခဲ့မယ်မသေချာကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် - ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ ၁၃ အကြောင်းရင်း ရာသီ 3
Nora Walker, Bryce Walker ရဲ့အမေကိုကစားတဲ့သူ Brenda Strong ဟာဒုတိယရာသီအတွင်း Netflix စီးရီးထဲကိုသာ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ Bryce ရဲ့မိဘများသို့သော်သူကသူ့ကိုယ်သူအဘို့အခုခံကာကွယ်ဖို့ Bryce ထွက်ခွာသူတို့မြို့ထဲကဘယ်လိုခဲ့ကြသည်ကိုရည်ညွှန်းသွားတာယခုအချိန်တွင်၌ပထမရာသီအတွက်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
ရာသီ ၂ သည် Bryce နှင့်သူ၏မိဘနှစ် ဦး စလုံးနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုအာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။ Nora သည်သူ၏သားသည်မည်မျှတတ်နိုင်သည်ကိုအပြည့်အဝကောင်းကောင်းသိသည်။ သူ့အဖေကမူလုံးဝငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမျက်စိကွယ်သွားသည်။
ပရိသတ်တွေအများကြီးထဲကထဲကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် Monty ပြန်3ရာသီအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားကြလိမ့်မည်အဖြစ် Brenda Strong ရဲ့မြှင့်တင်ရေးလာပေမယ့် Nora Walker ကမေးခွန်းအမှတ်အသား၏နည်းနည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုစဉ်းစား, Nora ရဲ့ storyline သူမကသိတယ်အရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသူမကဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်များကြည့်ဖို့, ရာသီ3၏မှောင်မိုက်မြင်း storyline ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Timothy Granaderos နှင့် Brenda Strong နှစ် ဦး စလုံးသည်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများသို့တက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ ရာသီ ၃ တွင်သင်မည်သည့်အရာများကိုမျှော်လင့်နေသနည်း ၁၃ အကြောင်းရင်း ? အောက်ပါမှတ်ချက်ကိုဖြုတ်။ သင်၏အတွေးများကိုကြွေးကြော်ပါ။
နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသစ် ၂၀ ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ကြည့်ရှုရန်
သဘာဝလွန်ရာသီ 10 netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ပင့်ကူကျမ်းပိုဒ်2လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲသို့ပင့်ကူသည်လူ
Bobger ဘာဂါရာသီ5netflix
ထင်းရူး netflix ကျော်လွန်ပြီးတစ်နေရာ